कुल अंग्रेजी व्यवस्था। अंग्रेजी व्यवस्थाको स्रोतहरू
मानिस एक सामाजिक भइरहेको छ। कि यो केवल समुदाय भित्र अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, छ। मान्छे बस संचार को उपस्थिति बिना हराउन सक्छ। आज सधैं मान्छे को अन्तरक्रिया मात्र कुरा बाहिर छ।
को XXI सताब्दी मा संचार - छ सार्वजनिक सम्बन्ध फरक प्रकृति को। यस मामला मा, जताततै मानिसहरू को अन्तरक्रिया यस प्रकारको समायोजित गर्नुपर्छ। धेरै समय भर मानिसजातिको सबैभन्दा प्रभावकारी सार्वजनिक सम्बन्ध संयोजक खोजे छ। खोजहरू समयमा यो फरक संस्थाहरू एक ठूलो संख्या प्रयास गरेको छ। पहिलो पनि हिंसा र धर्म थिए। आफ्नो मुख्य समस्या केही अवस्थामा नियन्त्रण गर्न नसक्नुको थियो।
उदाहरणका लागि, केवल कमजोर मान्छे हिंसाको हालतमा प्रभावित हुन सक्छन्, तर धर्म विश्वासीहरूले मा कार्य। तर, सार्वजनिक सम्बन्ध नियामक अझै पनि पाइएको छ। यो व्यवस्था भयो। यो संस्थाले XXI सताब्दी मा मुख्य एक भएको छ भनेर शक्तिशाली विकसित भएको छ। तर सही धेरै रोचक सुविधाहरू छ। उदाहरणका लागि, ग्रह मा, त्यहाँ एक जो अंग्रेजी व्यवस्था छ यो धेरै संस्करण हो। यसलाई एक निश्चित क्षेत्रमा कार्य द्वारा विशेषता र विशिष्ट संरचना र स्रोतहरु छ छ।
अधिकार: सामान्य अवधारणा
, कानुनी राजनैतिक, सामाजिक वा अन्य प्रकृतिको संस्थान सधैं एक अवधारणा र विशिष्ट संरचना छ। यस मामला मा अंग्रेजी व्यवस्था यसको शास्त्रीय फारममा सही एक offshoot छ। तसर्थ, कानुनी प्रणाली सबै व्याख्या ठीक अन्वेषण गर्न ब्रिटिश द्वीपहरु को, यो यसको प्रारम्भिक स्थिति विचार गर्न आवश्यक छ। त्यो छ, तपाईं के सही बाहिर आंकडा गर्न आवश्यक छ।
यो अवधारणा सुरक्षित र प्रत्याभूति जुन राज्य कानुनी मान्यता, को सिस्टम को मूल्य छ, र बिल्कुल सबै मान्छे को लागि बाध्यकारी गरिनेछ। यो उल्लेख गर्नुपर्छ प्रत्येक देश को सही प्रणाली, जो, बारी मा, कानुनी संस्कृति, चेतना र बोध हुन्छन् को रूप मा देखाइएको छ।
सही प्रमुख सुविधाहरू
कुनै पनि कानुनी घटना विशिष्ट सुविधाहरू एक नम्बर द्वारा विशेषता छ। हामी व्यवस्था बारे विशेष कुरा गर्दा, त्यसपछि त्यहाँ पनि यसको आफ्नै peculiarities छ। मिति, वैज्ञानिक समुदाय सामाजिक सम्बन्ध को नियामक को संकेत मा कुनै साधारण दृष्टिकोण छ। तर, सामान्य सुविधाहरू, धेरै अस्तित्व अनुमति जो एक नम्बर हो। मन, निम्नानुसार, दायाँ यस्तै छ भनेर मुख्य विशेषताहरु निम्न यो संग:
नियम को सारा सिस्टम धेरै मानिसहरूलाई परिचित छ आचरण, को नियम को banal सेट हो;
अनिवार्य वर्ण स्तर सिस्टम सबै र विविध गर्न को विस्तार भन्छन्;
राज्य कानुनी दायित्व स्थापना गरेर कार्य को सही ग्यारेन्टी;
मान्छे को मन र इच्छा व्यक्त गर्ने अधिकार;
नियम को सिस्टम वैधानिक नियमहरु मा व्यक्त गरे।
यो प्रस्तुत लक्षण सबैभन्दा क्लासिक छन् बुझे गर्नुपर्छ। त्यो छ, तिनीहरूले पनि शास्त्रीय व्यवस्था सबै शाखा लागि विशेषता हो।
अंग्रेजी व्यवस्था: अवधारणा
त्यसैले, हामी सार्वजनिक सम्बन्ध को कानुनी नियन्त्रण के शास्त्रीय फारम फेला परेन। यस मामला मा अंग्रेजी व्यवस्था - ऐतिहासिक गठन र यसको आफ्नै विशेषताहरु छन् थियो, इङ्गल्याण्ड र वेल्स मा अनिवार्य नियम को एक प्रणाली छ।
यो यस्तो कानुनी रूपरेखा यस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र अन्य कमनवेल्थ देशहरूमा धेरै देशहरूको ढाड को भाग हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। अंग्रेजी व्यवस्था बेलायत राष्ट्रका नियन्त्रणमा सबै क्षेत्रमा विस्तार। यस मामला मा, यो साँच्चै आज सम्म मान्य छ।
अंग्रेजी व्यवस्था को उद्भव को इतिहास
ब्रिटिश द्वीपहरु को कानुनी मान्यता को सिस्टम को गठन प्रक्रिया यसको विशेषता सुविधाहरू एक ठूलो संख्या छ। सबै को पहिलो, यो "अंग्रेजी मा" व्यवस्था युरोप टाढा गठन भएको थियो उल्लेख गर्नुपर्छ। छ, यो धेरै कन्टिनेन्टल देशहरूको कानुनी प्रणाली विषय भएको छ कि निरंतर परिवर्तन बाँच्न गर्दैन। साथै, समाज को आधारभूत आवश्यकता भिज्न यसको अस्तित्व नै अंग्रेजी व्यवस्था।
ब्रिटिश कानुनी सिस्टम 1189 मा सुरु बिन्दु थियो। त्यो क्षण देखि, अदालत अवस्थामा शक्ति व्यवस्था को रूप लिन र सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण संरचना, सार्वभौमिक हुन्छ मात्र tsivilisticheskoy।
धेरै इतिहासकारहरूले पनि ब्रिटिश सही को गठन मा ठूलो प्रभाव इङ्गल्याण्ड को नर्मन विजय थियो कि दाबी गर्छन्।
आखिर, यो राष्ट्र द्वीप यस दिन अवस्थित कि फरक कानूनी संस्थाहरु धेरै इलाका प्रवेश गरेको छ।
अन्य प्रणाली र तिनीहरूलाई प्रभाव अन्तरक्रिया
सबै समय मा अंग्रेजी साधारण व्यवस्था अन्य राज्य को कानुनी संरचना असर गर्छ। यो बेलायत लामो ठूलो उपनिवेश शक्तिहरु एक भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले, धेरै विषयहरू मा, त्यो क्षेत्रहरू अंग्रेजी व्यवस्था यसको प्राथमिक फारम काम। पनि उपनिवेश सिस्टम को पतन पछि, धेरै देशहरूमा आफ्नो कानुनी प्रणाली को आधारमा ब्रिटिश व्यवस्था पहिचान जारी। उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलिया मा कोर्ट सक्रिय precedents सान्दर्भिक ब्रिटिश अधिकारीहरु प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो उदाहरण, त्यहाँ धेरै छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग संग राष्ट्रिय अंग्रेजी व्यवस्था बीच अन्तरक्रिया पनि छ। एकै समयमा ब्रिटिश पक्ष SUPRA-राष्ट्रिय स्तर को आवेदन मा स्पष्ट स्थिति छ। बेलायत व्यवस्था अनुसार, कोर्ट उनि सीधा राज्य को आन्तरिक कार्यहरू दर्ता गरिन्छ भने मात्र नियम अन्तरराष्ट्रिय वर्ण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, अंग्रेजी व्यवस्थामा मानव अधिकार मौलिक स्वतन्त्रता मा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको नियम र 1998 मा प्रकाशित मानव अधिकार ऐन को प्रावधान, द्वारा शासित। यस मामला मा, प्राथमिकता normative कागजात अन्तिम को नियम दिइएको छ।
ब्रिटिश कानुनी संरचना को सेक्टर विभाजन
यो अंग्रेजी कानुनी सिस्टम उद्योग को एक ठूलो संख्या बनेको छ। उद्योग को कन्टिनेन्टल कानुनी संरचना संग analogy गरेर फरक प्रकृतिको सामाजिक सम्बन्ध regulates। साथै, तिनीहरूलाई प्रत्येक आफ्नै को विशिष्ट सुविधाहरू एक नम्बर छ। उदाहरणका लागि, अंग्रेजी आपराधिक व्यवस्था वास्तवमा प्रणालीको सामान्य नियम बाट लिइएको हो। यस अपराधको लागि तिनीहरूले जो, बारी मा, प्रतिबद्ध भएको प्रेरित उद्देश्य र आत्मपुरक विशेषताहरु द्वारा विशेषता छ दुई तत्व छ। को अंग्रेजी आपराधिक उद्योग को मुख्य विशेषता एक codified कार्य को कमी छ।
त्यहाँ अन्य कानुनी उद्योग, ब्रिटिश सिस्टम हो उदाहरणका लागि:
श्रम क्षेत्र, र यति मा। N।
वैज्ञानिक समुदाय सबैभन्दा विवाद भएको अंग्रेजी नागरिक व्यवस्था छ। प्रायजसो यसको अस्तित्व बस अस्वीकार किनभने।
को अंग्रेजी नागरिक व्यवस्था को विशेष
बेलायतमा नागरिक व्यवस्था - एक गैर-अस्तित्वहीन उद्योग। त्यो छ, यो हाम्रो देश को मान्छे हेर्न प्रयोग जसमा रूप मा प्रस्तुत गरिएको छैन। बेलायत मा त्यहाँ निजी र कानुनी प्रणालीको परम्परागत विभाजन छ सार्वजनिक व्यवस्था सामान्य मा। तर नागरिक समाज सम्बन्ध, पाठ्यक्रम, नियमन छन्। तपाईं सैद्धान्तिक पक्ष संग अंग्रेजी नागरिक व्यवस्था देखो भने, र यो निम्न शास्त्रीय संस्थाहरु हुन्छन्: सम्पत्ति, अनुबंध र टोर्टहरू।
सबै समय मा अंग्रेजी व्यवस्थामा सम्पत्ति अधिकार विशेष बुझे थियो। आज हामी मध्य युग सम्पत्ति विनियमन मा पर्याप्त लचिलो थियो भनेर थाह छ। यो संस्थाले ती दिन पहिले नै वास्तविक दयालु र निजी विभाजित भएको थियो। मिति, नागरिक अधिकारको कानुनी प्रभाव धेरै स्थिर ऐतिहासिक फारम अवस्थित।
अंग्रेजी व्यवस्थाको स्रोतहरू
ब्रिटिश कानुनी सिस्टम अन्य थुप्रै प्रावधान संग, यसको आधार एकदम कन्टिनेन्टल प्रणाली स्रोतहरू लागि असामान्य छ। यस मामला मा विशिष्टता विभिन्न कारण छ। उदाहरणका लागि, एक एकदम ठूलो भूमिका कन्टिनेन्टल प्रभाव टाढा ऐतिहासिक विकास द्वारा प्ले। आखिर, अंग्रेजी व्यवस्था सधैं स्वतन्त्र विकसित भएको छ। यो कुनै प्रभाव रोमी कानुनी सिस्टम को स्वागत भएको थियो।
त्यसैले, अंग्रेजी व्यवस्थामा प्रमुख मिति निम्न स्रोतहरू छन्:
यी स्रोतहरू आफ्नो वैधता को क्रम मा सूचीबद्ध छन्। हामी देख्न सक्छौं रूपमा, अंग्रेजी व्यवस्था गर्न प्रमुख न्यायिक नमुना regains।
नमुना - ब्रिटिश सिस्टम को स्रोत
सबै समय मा बेलायतमा न्यायिक अभ्यास, फिर्ता एक प्रमुख भूमिका जित्यो। यसको कोर मा, एक मिसाल - यो न्याय प्रशासन एक स्वीकार र समान अवस्थामा विचार गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ बन्ने छ जो एक सर्वोच्च शरीर को निर्णय छ।
अंग्रेजी व्यवस्थाको नमुना को धेरै सिद्धान्त कारण यस्तो कुञ्जी भूमिका। उनको अनुसार, अदालत सुरक्षा सधैं कानुनी प्रणालीको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा, यो पनि उच्चतम न्यायिक अधिकारीहरु को निर्णय वास्तवमा व्यवस्था को मूल्य छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यस मामला मा, यो आधिकारिक नियमहरु को मान्यता भन्दा प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ। आखिर, सबैभन्दा बाहिर नमुना व्यवस्था को प्रावधान गर्न विपरीत fleshed। शुरू स्रोत जस्ता अधिकारीहरु गतिविधिहरु देखि उभर प्रभुहरूका घर अपील को र उच्च न्यायालय।
अंग्रेजी व्यवस्थामा व्यवस्था को भूमिका
Normative प्रेरित सम्पूर्ण ब्रिटिश सिस्टम को दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कन्टिनेन्टल व्यवस्था देशहरूमा, यो सही उत्पन्न गर्छ। अंग्रेजी तरिका मा अनुवाद एकदम यो सिद्धान्त alters। बेलायत मा, कानून (वा नियमहरू, तिनीहरूले भनिन्छ रूपमा), नियम, संसद द्वारा प्रत्यायोजित सरकार अख्तियारको आधारमा स्वीकृत छन्। यस मामला मा, नियमहरु सम्पूर्ण प्रणाली, जो पनि अधीनस्थ कागजातहरू समावेश छ। तथापि, इङ्गल्याण्ड मा व्यवस्था र विधिशास्त्र को अन्तरक्रिया सजिलो बनायो। धेरै अवस्थामा, स्तर को नियमहरू पुष्टि र स्पष्टीकरण आवश्यक पर्दछ। पहिले भन्यो, कानून नियमहरु precedents मा निहित छ जो विशेष, छैन।
अंग्रेजी व्यवस्था र अनुकूलन
को अंग्रेजी कानुनी प्रणालीको यी मुख्य स्रोतहरु साथै, त्यहाँ पनि एउटा सानो छ। यस्तो कानुनी अनुकूलन छ। बेलायत मा, यस घटना को दुई प्रजातिहरू छन्। पहिलो प्रकार - संवैधानिक परम्परा छ। तिनीहरूले सम्पूर्ण राज्य को प्रक्रिया मा एकदम महत्वपूर्ण भूमिका बाहिर कार्य। संवैधानिक परम्परा पछि सबै भन्दा सरकारको क्षमता परिभाषित। दोस्रो प्रकारको फरक प्रकृतिका सामाजिक सम्बन्ध अभिशासित भन्सार छन्। तर केही सुविधाहरू छन्। यो एक प्राचीन, पुरातन वर्ण छ भने बेलायत मा अनुकूलन पहिचान गरिनेछ भन्ने तथ्यलाई। यो पनि कन्टिनेन्टल को अंग्रेजी कानुनी प्रणालीबाट धेरै तरिकामा अलग छ।
तसर्थ, हामी "अंग्रेजी मा।" अधिकार जांच यसको शास्त्रीय फारम यो कानुनी प्रणाली संसारको कुनै प्रत्यक्ष analogues छ। पङ्क्तिमा धेरै शताब्दीयौंदेखि अंग्रेजी व्यवस्था प्रभावकारी समाज को सामाजिक सम्बन्ध regulates। तसर्थ, यसलाई आफ्नो कानुनी संरचना स्तरवृद्धि गर्न यस्तो रूढिवादी सिस्टम को लाभ टिप्पण लायक छ भन्छ।
झण्डा प्यालेस्टाइनमा: तस्बिर, मूल र मिति को इतिहास
को demobilization के हो र यो कसरी आरक्षित गर्न स्थानान्तरण देखि भिन्न छ?
कानुनी प्रतिनिधि - ... छ अधिकार, कानुनी प्रतिनिधि को कर्तव्य र सहमति
सार्वजनिक अख्तियारको लक्षण र अवधारणा
Israeli राष्ट्रपति: आफ्नो जीवन र रोचक तथ्य
सम्पत्ति को cadastral नम्बर के हो?
Scratched pubis के भने?
आज क्षेत्र बाड
रोग सुन जस्तो माछा - आफ्नो मास्टर हेरचाह
Kesh Uorren: अभिनेता र निर्माता
Polenovo संग्रहालय (टुला क्षेत्र): निर्देशित पर्यटन, प्राप्त गर्न कसरी समीक्षा
किन च्याट "Dota 2" छैन? सम्बोधन
बैरलमा, डिब्बा र प्याकेजहरू, तपाईले ठट्टा साल्टिङको अचम्मको कर्कर पाउनुहुन्छ
गर्मि लागेर हुने विरामी: लक्षण र उपचार, र जिम्मेवारी को उपाय
महिलाहरु को लागि स्वेटर - यो दराज अभिन्न भाग हो।
विट्रो भ्रूण संस्कृतिमा लामो समयसम्म। जुवाहरु र भ्रूण को खेती - के यो छ?
फोटो संग नाम: पुरुषहरु जूता को प्रकार
गतिशीलता समस्या मा निर्णय। D'Alembert गरेको सिद्धान्त